अमिताभ बच्चनलाई लाग्यो ठुलो झट्का: ९ सेकेन्डमा डुब्यो ६ सय ४० करोड! - Purbeli News
अमिताभ बच्चनलाई लाग्यो ठुलो झट्का: ९ सेकेन्डमा डुब्यो ६ सय ४० करोड!
प्रकाशित मिति: बिहिबार, पौष २०, २०७४ समय: १३:२९:५६
एजेन्सी । बलिउडका महानायक अमिताभ बच्चनलाई एक झट्का लागेको छ । बिग बीलाई करोडौको घाटा लागेको छ । उनलाई करिब ६ सय ४० करोडको घाटा भएको छ । हालै बिटक्वाइन आएर तीव्ररुपमा बिग बीले ६ सय ४० करोड कमाएका थिए ।
उनले ३(४ वर्ष पहिलो यस क्रिप्टोकरेन्सीमा थोरै लगानी गरेका थिए । बिग बीले हैदराबादको स्टैमपीड क्यापिटल मार्फत यसको अप्रत्यक्ष कारोबार गरेका थिए । यो कम्पनीले करिव ९ सेकेन्डमा करोडौको लेनदेन गर्ने गर्दछ । कम्पनीले अमिताभलाई ईन्डिभिजुअल नन प्रमोटर शेयर होल्डर बताएका छन् ।
पछिलो समयमा नै बिग बीको यस कम्पनीमा २।३८ शेयर थियो । कम्पनीमा बिग बीको हिस्सेदारी जून, २०१४ देखि रहेको थिय तर लगानी राशि बदलिदै गर्दछ । स्टैमपीड क्यापिटल अमेरिकी कम्पनी लांगफिन कोर्पोरेशनको सहयोगी हो ।स्टैमपीडको लांगफिनमा ३७।१४ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ र स्टैमपीडमा अमिताभको २।३८ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ ।